Ugbua onye na -anya ụgbọ ala, igwe kwụ otu ebe ka na -adị ọhụrụ na ebe ịgba ịnyịnya. Mana ha abụghị naanị maka ndị njem na -achọ inwe ike iji ụgbọ ala ha wụnye na bọs ma ọ bụ ụgbọ oloko, yana chekwaa ya n'okpuru tebụl ha n'ọrụ. Ha nwekwara ike bụrụ oke nhọrọ maka onye ọ bụla nwere oke ...
Otu esi ahọrọ igwe kwụ otu ebe
Na -achọ njem ọhụrụ? Mgbe ụfọdụ asusu igbo nwere ike na -eyi egwu. Ozi ọma ahụ bụ na ịkwesighi ịdị na-ekwu okwu igwe kwụ otu ebe iji kpebie igwe kwụ otu ebe kacha mma maka ihe nkiri ụkwụ gị nwere ụkwụ abụọ. Enwere ike sie usoro ịzụrụ igwe kwụ otu ebe ruo usoro ise: -Chọpụta ụdị ụdị igwe kwụ otu ebe kwesịrị ekwesị ...
Ịchọ akụkọ ọhụrụ banyere ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe, enwere isiokwu abụọ enweghị ike izere: otu bụ ire ọkụ. Dabere na data sitere na Association Bicycle China, kemgbe nkeji mbụ nke afọ a, ọnụ ahịa ụlọ ọrụ gbakwunyere igwe kwụ otu ebe nke obodo m (gụnyere igwe eletrik ...
Uru nke ịgba ígwè
Uru ịgba ịnyịnya ígwè fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị njedebe dịka ụzọ obodo ị nwere ike ịgagharị n'oge na -adịghị anya. Ọ bụrụ na ị na -atụle ịnya ịgba ịnyịnya, na ịtụle ya na ihe omume ndị ọzọ nwere ike ime, mgbe ahụ anyị bịara ebe a ịgwa gị na ịgba ígwè bụ nhọrọ kacha mma. 1. ỊGWANYE na -akwalite M ...
Ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na China
Laa azụ n'afọ ndị 1970, ịnwe ịnyịnya ígwè dị ka "nduru na -efe efe" ma ọ bụ "Phoenix" (abụọ n'ime ụdị ịgba ịnyịnya kacha ewu ewu n'oge ahụ) bụ otu okwu nke ọkwá dị elu na nganga. Agbanyeghị, na -eso uto ngwa ngwa China n'ime ọtụtụ afọ, ụgwọ ọrụ abawanyela na Chinese nwere ikike ịzụta ihe dị elu ...
Njem Ịnyịnya Ịnyịnya nke China
Agbanyeghị na njem nlegharị anya na -ewu ewu n'ọtụtụ mba na Europe dịka ọmụmaatụ, ị maara na China bụ otu n'ime mba kachasị ukwuu n'ụwa, yabụ na ọ pụtara na anya dị ogologo karịa ebe a. Agbanyeghị, na-eso oria ojoo nke Covid-19, ọtụtụ ndị China na-enweghị ike…